युरोपमा टिपिंग गर्नको लागि अन्तिम मार्गनिर्देशन | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > युरोपमा टिपिंग गर्नको लागि अन्तिम मार्गनिर्देशन
पढ्ने समय:6मिनेट(Last Updated On: 20/05/2020)
विश्व भर, टिपिंगका धेरै फरक प्रभावहरू र अभ्यासहरू हुन्छन्, उदाहरणका लागि: दक्षिण अफ्रिकामा टिपिंग आवश्यक छ, यो मा छ रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका. तपाइँ बीचको एक टिप छोड्ने आशा गरिन्छ 15 र 25% अमेरिकामा, र यदि तपाईं गर्नुहुन्न भने तपाईंलाई इरिट वेटरले राम्ररी पीछा गर्न सक्छ. तर युरोपको बारेमा के? युरोपमा धेरै बिल सुझावहरूको समावेशी हुनेछन्, तथापि, यो देश अनुसार फरक फरक हुन्छ. तपाईंको गन्तव्य देशमा विशेष सल्लाह दिने अभ्यासहरू थाहा पाउँदै भ्रम र सम्भावित नकारात्मक भावनाहरू हटाउनेछ. त्यसैले युरोपमा टिपिंगको लागि अन्तिम गाइडको लागि पढ्नुहोस्!
रेल परिवहन भएको इको-मैत्री मार्ग यात्रा हो. यस लेखमा बचत एक ट्रेन द्वारा ट्रेन यात्रा बारे शिक्षित गर्न लेखिएको छ, सस्तो ट्रेन टिकट वेबसाइट संसारमा.
युरोपमा सेवा मार्फत अन्तिम मार्गनिर्देशन
युरोपमा टिपिंग सामान्यतया तपाईले पाउनु हुने सेवाको प्रकारमा निर्भर गर्दछ. उदाहरणका लागि, तपाईं काउन्टर पछाडिको सर्भरमा बिभिन्न आधारमा पाँच-तारे रेस्टुरेन्टमा एक वेटरलाई टिप दिने आशा गरिन्छ. बारटेन्डरहरूले केहि केसहरूमा टिपको आशा गर्दैनन्, जहाँ ट्याक्सी चालकहरू हुन्छन्. तपाईंको विवेक प्रयोग गर्दै, र उदारता सधैं राम्रो सल्लाह को लागी जाँदा एक राम्रो तरीका हो. पनि, धेरै स्थानहरूमा तपाईंलाई नगदमा टिप चाहिन्छ, यसैले निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईमा केही यूरो नोटहरू जहिले पनि लैजानुहोस्.
टिपिंग भित्र रेस्टुरेन्ट
खाना वा पेय तालिकामा ल्याइएको कुनै पनि अवस्थालाई प्राय टिपको आवश्यक पर्दछ. रकम भोजनको क्रममा निर्भर गर्दछ जुन तपाईंले रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ. युरोपमा टिप्सिंगका लागि मानक प्रक्रिया भनेको बिल रकमको माथि एक वा दुई यूरो बिल छोड्नु हो यदि एक पेय तर एक खाना आदेश छैन भने।. सिट-डाउन वातावरणमा पूरा खाना फरक हुन्छ. यस मामला मा,afew Euro’s per person is usually sufficient. Five-star restaurants across Europe usually include the tip in their bill. यो जाँच गर्न निश्चित हुनुहोस् किनकि अतिरिक्त टिप छोड्नुपर्दैन जबसम्म तपाईले आफ्नो सेवाको आनन्द लिनुहुन्न. उत्कृष्ट सेवालाई कहिलेकाँही थप टिपको आवश्यक पर्दछ, त्यसैले यी मामलाहरूमा, तपाईं सबै बाटोमा जान सक्नुहुन्छ 15%.
महाद्वीपमा प्राय: पबहरू वा बारहरूले सबै सुझावहरूको आशा गर्दैन. बारटेन्डरहरूलाई एक तलब दिइन्छ, र जब टिप जारमा केही सिक्का सम्भवतः सराहना गरिन्छ, यो आवश्यक छैन. यदि तपाईं टिप गर्नुहुन्छ, फेरि नगद मात्र प्रयोग गर्न सम्झनुहोस्, या त नोट वा सिक्का. यदि तपाइँ एक खाली अन्तमा हुनुहुन्छ मामला मा यहाँ एक सूची छ5प्रत्यक्ष संगीत युरोप मा राम्रो बार.
ब्रसेल्स एम्स्टर्डम टिकटहरु
लन्डन एम्स्टर्डम टिकटहरु
बर्लिन देखि एम्स्टर्डम टिकटहरू
पेरिसदेखि एम्स्टर्डमको टिकटहरू
स्टाइलिस्टहरू र स्पाको
धेरै व्यक्ति नयाँ ताजा केश प्राप्त गर्न चाहन्छन्, वा आरामदायी मसाज छुट्टीमा हुँदा. भाग्यले तपाई स्पाको र स्टाइलिस्टहरू भेट्टाउने छौ सम्पूर्ण युरोपमा, प्रायः सबै शहरमा. टिपिंग, कुनै पनि अवस्थामा, सामान्यतया करीव १० प्रतिशत हुन्छ. यदि तपाईले पाउनु भएको सेवाबाट तपाई अविश्वसनीय खुशी हुनुहुन्छ, तपाई जस्तो माथि जान सक्नुहुन्छ 15%.
न्यूरेम्बर्ग प्राग टिकटहरु
म्युनिकबाट प्राग टिकटहरू
बर्लिन प्राग टिकटहरु
भियना प्राग टिकटहरु
होटलहरू प्रायः क्वेरी हुन्छन् जब यो युरोपमा टिपिंगको सवालमा आउँछ. औंठाको नियमको रूपमा, एक जहिले पनि एक यूरो दिशानिर्देश पछ्याउनु पर्छ. यसले मूल रूपमा यो भन्छ कि तपाइँ प्रति सेवामा एक यूरो छोड्नुहुन्छ. यदि घण्टी वा पोर्टरले तपाईंको झोला बोक्छ भने, त्यसोभए प्रति ब्याग एक यूरो पर्याप्त छ. घर सफा गर्न एक दिन एक यूरो प्राप्त गर्नुपर्छ. तपाईंको द्वारपाल टिपिंग तपाईंको आफ्नै विवेकमा छ, तर यो तपाइँको सेवा को स्तर मा निर्भर गर्दछ. यदि तिनीहरू माथी भन्दा पर गएका छन् तपाईंको यादगार र रमाइलो रहन सक्छ, त्यसो भए पाँचदेखि दस युरोको टिप्स वा पछाडि यो पनि उपयुक्त छ.
फ्रान्कफर्ट बर्लिन टिकटहरु
बर्लिन टिकट लाइपजीग
हनोवरबाट बर्लिन टिकटहरू
ह्याम्बर्गबाट ​​बर्लिन टिकटहरू
ट्याक्सी र उबेरहरू युरोपको वरिपरि हुने आन्तरिक अंश हो. के टिप छनौट गर्दा, ड्राइभरलाई कसरी भुक्तानी गरिन्छ भन्ने कुरा मनमा राख्नु उत्तम हुन्छ. साधारणतया, हुनत, छोटो ट्याक्सी वा उबर सवारीको लागि दुई यूरो टिप उपयुक्त छ. उबर जस्ता अनुप्रयोगहरूले तपाईंलाई चालकलाई इलेक्ट्रोनिक टिप गर्न अनुमति दिन्छ, जबकि मीटरि tax ट्याक्सीहरूलाई नगद चाहिन्छ. यात्राको क्रममा युरोपमा टिपिंग भनेको बारहरू वा रेस्टुरेन्टहरूमा टिप्स गर्ने जत्तिकै हो. दिमागमा राख्नुहोस् कि यो सधैं आवश्यक हुँदैन, but often appreciated. तपाईंको ट्रेन टिकट बुकिंग आफ्नो लागि युरोपेली यात्रा संसारको सबैभन्दा सस्तो ट्रेन टिकट वेबसाइटको साथ सरल र पूर्व हो.
देश द्वारा युरोपमा टिपिंग गर्नको लागि परम मार्गनिर्देशन
धेरै देशहरूले उही सामान्य दिशानिर्देशहरू पालना गर्दछन् जब यो युरोपमा टिपिंगको कुरा आउँदछ. को पाठ्यक्रम, एउटा जहिले पनि इच्छित गन्तव्य खोजी यात्रा गर्नु अघि यो निश्चित गर्नको लागि कि तपाईं पूर्ण रूपमा अद्यावधिक हुनुहुन्छ. रेल यात्रा प्राय: एकै समयमा तपाईंलाई धेरै देशहरूमा लैजान सक्छ, त्यसोभए प्रत्येकमा के गर्ने भनेर निश्चित हुनु सधैं सहयोगी हुन्छ. केहि देशहरू नियमका आधारमा आफ्ना समकक्षहरूबाट अलग देखिन्छन्, तथापि.
आइसल्याण्ड र स्कान्डिनेभिया
चाहे उनीहरूको वाइकिking उत्पत्तिमा थ्रोब्याक होस् वा साधारण सरलता, यी देशहरूले तपाईंलाई कुनै पनि सल्लाह नदिने मन गर्दछन्. धेरै जसो रेस्टुरेन्ट र सेवाहरूको टिप बिलमा समावेश हुन्छ. अझै नगद वा क्रेडिट कार्ड मार्फत सुझावको बदले बिलको नजीकको यूरो सम्म गोल गर्न उचित छ.
ग्रीकले सबै थोरै फरक तरिकाले गर्छ, र टिपिंग पनि यसको अपवाद हुँदैन. ठुलो बिलहरुलाई सानो सल्लाहको आवश्यक पर्दछ र सानो बिलहरुलाई ठूला सल्लाहहरुको आवश्यक पर्दछ.
कम्तिमा छोड्नुहोस् 5% टिप, सर्भर को लागी नगद मा, even if the bill includes gratuity. Cash is always king in most European countries, र अस्ट्रिया भन्दा फरक छैन.
उनीहरूको मित्रताको लागि परिचित, यी दुबै राष्ट्रहरूले खुशीका साथ तपाईको झोला बोक्नेछन्. लगेज भरियाहरूका लागि टिपिंग आवश्यक छैन, र प्राय: अपेक्षित हुँदैन. दयालु हुनु र विनम्रतापूर्वक भन्नु भनेको हो, तथापि, अपेक्षित. यदि तपाईं भविष्यमा उही सेवा तपाईंको पोर्टरबाट प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरूलाई सकारात्मक सहयोग दिनुहोस्.
What To Tip In Europe – ब्रिटेन
धेरै बेलायती मानिसहरूले पर्यटकहरूलाई समझाउने प्रयास गरेका छन् कि घरको सुरक्षाको लागि सल्लाह दिने काम वास्तवमै आवश्यक छैन. जब यो युरोपमा टिपिंग गर्न आउँदछ, यो एक निश्चित नियम हो. तपाईंको होटेलको कोठामा टिप नछोड्नुहोस्, यो सम्भवतः हराएको रूपमा अगाडि डेस्क मा हस्तान्तरण हुनेछ पैसा. बारटेन्डरले पनि सुझावहरूको आशा गर्दैन, र टिपिंग तल भ्रम गर्न सकिन्छ. कुनैपनि तरिकाले, मित्रैलो हुनुहोस् र तपाईंको बार्टेन्डर स्वीकार्नुहोस्. टिप जारमा केही सिक्का राख्नुहोस् यदि एउटा छ भने. यदि छैन, बरु समीकरण बाहिर टिप छोड्नुहोस्.
एम्स्टर्डम लन्डन टिकटहरु
पेरिसदेखि लन्डन टिकटहरू
बर्लिनदेखि लन्डन टिकटहरू
ब्रसेल्स लन्डन टिकटहरु
युरोपमा टिपिंगको बारेमा सबै जानकारी राउन्ड गर्दै
युरोपमा टिप्स लगाउनको लागि उत्तम सल्लाह भनेको तपाईंको गृहकार्य गर्नु हो. देशको बारेमा सबै पढ्नुहोस्, वा ती देशहरू जुन तपाईंले भ्रमण गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ. त्यो याद गर्नुहोस् ट्रेन यात्रा अक्सर तपाईंलाई धेरै देशहरूमा लैजान्छ कि तपाईं मा रोक्न सक्षम हुन सक्छ. सँधै नगद ल्याउनुहोस्, दुबै सिक्का, र केही नोटहरू नगद मा टिप गर्न. यदि तपाईं नीतिहरूमा अनिश्चित हुनुहुन्छ, रेस्टुरेन्टहरूको लागि दश प्रतिशत नियममा अडिनुहोस्, and the one Euro rule for everything else.
सम्झनु, हामी तपाइँलाई यात्रा को बारे मा शिक्षित गर्न मनपराउँछौं, त्यसोभए जब समय सहि हुन्छ र तपाईंले यात्रा गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ, याद गर्नुहोस् कि ट्रेन यात्रा हाम्रो विशेषता हो र छनौट गर्नुहोस् एक ट्रेन सेव, हामी तपाइँलाई तपाइँको यात्राको मजा लिन मद्दत गर्न चाहन्छौं!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “युरोपमा टिपिंग गर्नको लागि अन्तिम मार्गनिर्देशन” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र हामीलाई क्रेडिट दिन सक्छ यो ब्लग पोस्ट गर्न लिंक. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fguide-tipping-europe%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
निम्न लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- यो लिंक अंग्रेजी मार्गहरू अवतरण पृष्ठ लागि हो, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, र तपाईं डे फ्रा वा ट्र मा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको छनौटको अधिक भाषाहरू.
#रेस्टुरेन्ट europetravel खाद्य TippingEurope रेल यात्रा traveltips Vacations